आत्महत्या गर्छु भनेर फेसबुकमा लेख्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले बचायो ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
आत्महत्या गर्छु भनेर फेसबुकमा लेख्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले बचायो !
Published : 28 July, 2020 1:12 pm
आत्महत्या गर्छु भनेर फेसबुकमा लेख्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले उद्दार गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्ज र प्रहरी प्रभाग, बसपार्कको टोलीले झापाको अनारमनी–४ घर भएका सुनिल अग्रवाललाई उद्दार गरेको हो ।
महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्काका अनुसार सोमबार बिहान साढे ११ बजे अग्रवालले फेसबुकमा अन्तिम पोष्ट लेखेको घोषणा गर्दै कसैलाई पनि नरिसाउन भनेका थिए । साथै, उनले जिन्दगीमा धेरै तनाव भएर केही सोच्ने क्षमता नभएपछि आत्महत्या गर्न लागेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
उनले आफ्नो मृत्युको खबर घरसम्म पनि नपठाइदिन भनेका थिए । ‘मेरो अन्तिम इच्छा यही हो, कसैसँग केही गुनासो छैन । म आफैं हिम्मत हारिसकेको यो जुनीमा दुःख मात्र भागेको सायद अर्को जुनीमा दुःख भोग्नु नपरोस्’, उनले भनेका थिए ।
यो पोष्टबारे थाहा पाउने वित्तिकै प्रहरीले उनको खोजी थालेको थियो । त्यसक्रममा उनी बसपार्कमा बिजी मल नजिकै रहेको पश्चिम लुम्बिनी गेस्ट हाउसको ३०१ नम्बर कोठामा बसेको खुलेको थियो । लगत्तै उनलाई उद्दार गरेर गोंगबु प्रहरीमा राखेर काउन्सिलिङ थालिएको थियो । त्यसक्रममा उनी डिप्रेसनको शिकार भएको पनि खुलेको थियो । प्रहरीका अनुसार अग्रवालको परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन भने विगत ८ महिनादेखि उनी होटलमा बसिरहेका थिए । हाल उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।